Bagga hore - Finentry
Finland miyaad u safreeysaa?
Waxaanu dooneeynaa in aan hubinno oo si sahlan loo safro walwal la'aan xaaladda koroonaha inta lagu gudo jiro.
FINENTRY waa adeeg digital ah, kaaso o sahlaya ku safridda Finland iyo soo gelista xagga arrimaha la xiriira baarista feyruuska koroonaha. Awaamiirta xuduudaha Finland weey is beddeshay. Hagista la xiriirta dadka soo galaya iyo xaddidaadyada waxaad ka heleeysaa bogga hey’adda ilaalisa xuduudaha.
Adeegga halkakan ka gal
Ka dooro doorarka soo socda, kan xaaladdaada tilmaamaya:
Aniga waxaan ahay Finnish ama si joogto ah ayaan Finland u degganahay waxaana ku soo noqonayaa Finland oo dibedda kaga imaanayaa
Qofka dhalashada Finland heysta ama qofka sida joogtada u deggan Finland waxeey xaq u leeyihiin in eey ku soo laabtaan Finland waqti feyruuska koroonaha. Sidoo kale qofka heysta dhalashada Finland, ku tirsanayaasha reerkiisu weey soo geli karaan waddanaka oo kuma xirna halka aay u dhasheen.
Waxaad u imaaneeysaa Finland dalxiise ahaan
Awaamiirta xuduudaha Finland weey is beddeshay. Hagista la xiriirta dadka soo galaya iyo xaddidaadyada waxaad ka heleeysaa bogga hey’adda ilaalisa xuduudaha.
Waxaan Finland u imaanayaa shaqo ama waxbarasho amaarrinkale oo lagama maarmaan ah
Sidaan ayaad uga hortagi kartaa baahista feyruuska koroonaha
Ka taxadir gacmaha iyo hab wanaagga loo qunfaco.
U jirso fogaan 2 mitir ah dadyowga kale.
Isticmaal waji xidhka, goorta aadan ka fogaan karin dadka.
Haddii aad calaamadaha xanuunka aad isku aragtid, aad oo tag baarista koroonaha oo ku sugnoow guriga ama goobta aad seexatid.
Ka soo dajiso barnaamijka koroonaha.
Si wadajir ah aannu u hubinno safar bedqaba iyo ku sugnaasho Finland xataa xilliga waqtiga cudurka faafa feyruuska koroonaha uu jiro!